Guddi loo Magacaabay Deegaanadii ay Duufaantii Chapalla ku Dhufatay – Radio Daljir
Guddi loo Magacaabay Deegaanadii ay Duufaantii Chapalla ku Dhufatay
Nofeembar 11, 2015 3:43 b 0
Somalia, November 11, 2015-(Daljir)_ Madaxwaynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa goor dhawayd soo saaray qoraal uu ku magacabayo guddi qiimayn kusoo samaynaya Gobaladda ay saamaysay labadii duufaan ee dhowaan bariga Puntland ku dhuftay.
Gobaladda ay guddigan qiimaynta ku samaynayaan ayaa kala ah Bari,Karkaar iyo Gardufuu, waxayna soo gudbin doonaan sida ay xaaladu tahay.
Guddiga uu madaxwaynaha magacaabay ayaa ka kooban wasaraddo, hayaddo iyo Telefeshinka dowladda. Puntland Tv iyo Radio.
”Madaxwaynaha Puntland isagoo dareensan baahida loo qabo magacaabida guddi heerkiisu sareeyo oo qiimeyn ku sameeya dhammaan deegaanadii ay waxyeeladu kaoo gaarta duufaanihii ku dhuftay Gobaladda Bari,Karkaar iyo Gardufu wuxu magacaabay guddi ay ku jiraan wasaaradaha ugu muhiimsan ee Puntland \_” ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Wariye Jaamac Abdurahman
Dacwadda Dilka wiil Somali ah oo Maraykanka ka Bilaabatay